Tsotra tsotra sy mora mora amin'ny sary
Ny sary dia mitana andraikitra goavana amin'ny fananganana kalitao sy faniriana votoaty. Azonao alaina sary an-tsaina hoe tena manahirana ianao raha manokatra pejy amin'ny tranonkala afa-tsy amin'ny lahatsoratra marobe. Ny sary eo amin'ny sary, sary, sary an-tsipiriany, ary antontan-dahatsary hafa sary dia mampifantoka ny maso ny votoatinao. Ankoatr'izany, dia afaka manararaotra ny fifamoivoizana izy ireo (mazava ho azy amin'ny alàlan'ny valin'ny fikarohana sary) - how long can grain be stored in silos.
Na izany aza dia mampahatsiahy anao i Lisa Mitchell, mpitarika Success Manager Manager Semalt , fa mety hitranga izany rehetra izany raha manatsara ny sary nataonao amin'ny Google ianao sy ny hafa karoka .
Mifidy ny sary lavorary
Dingana voalohany: Ataovy azo antoka fa manan-danja - Ny webmasters rehetra dia tsy maintsy miantoka fa manan-danja sy mandray anjara ny tranonkala. Ny traikefan'ireo mpampiasa ratsy dia hitarika ho amin'ny fanatsarana avo lenta, noho izany dia misafidy sary mifanaraka amin'izany, ianao dia eo amin'ny lalana marina.
Mifidy ny blôginao sy ny tranonkalanao amin'ny alalan'ity toro lalana manaraka ity:
Mitandrema fa ny sary dia mifandraika amin'ny momba anao na ny lohahevitra
Fidio ireo sary izay manasongadina ireo hevitra tianao hotsiahy.
Ny sarinao dia tsy maintsy manatsara ny traikefa mijery / mamaky teny fa tsy manakorontana izany.
Ankoatra izany, aza hadinoina ny misoroka ny sary. Ireo no mahatonga ny pejy web-nao hitanao manerantany, manahirana ary tsy miresaka mihitsy. Na dia mety ho lafo be aza ny mahazo sary tsara, dia mety tsy ho ratsy hevitra ny hanànana mpaka sary matihanina.
Dingana faharoa: Fahazoana sary maimaim-poana
matokia ahy; Tsy te hisaraka amin'ny zon'ny mpamorona ianao. Noho izany dia hevitra tsara foana no ampiasainao amin'ny sary. Ireto misy fitaovana sasany azonao ampiasaina hanamboarana ny sary.
Canva - dia misy tahirin-tsarimihetsika misy sarimihetsika misimisy kokoa fanohanana sy vaksera, izay azonao ampiasaina mba hampiasana ny sary hosodoko .. Afaka manana sivana ihany koa i Canva
Freepik - ity fitaovana ity dia mifanitsy amin'ny motera finday. Hikirakira sary an'arivony maro izy mba hanomezana anao izay mifanaraka amin'ny fikarohanao tsara indrindra. Freepik dia loharano lehibe ho an'ny PSD, sary, sary, sary, ary sary.
Google Images - tonga lafatra io loharano io fa mitandrema amin'ny sary maimaim-poana. Noho izany, hanova ny valin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fisafidianana 'asiana fampiasana indray.'
Flickr - Amin'ity tranga ity, mampiasa fahazoan-dàlana ho an'ny tompony, na iray na avy amin'ny iray tsy ara-barotra mba hisorohana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona.
Nahazo ny anaran'ny fichier sary
Rehefa noforonina sary iray manokana ianao dia manomboka ny asa tena izy. Ny fanamafisana ny sary dia manomboka amin'ny fisafidianana ny filaharam-potoana marina. Nahoana? Eny, manatsara ny fizaràn'ny SEO izy ireo. Ireto ny sarin'ny fichier tena tsara izay tokony hampiasaina hampiasaina:
Ampiasao ny biriky ho toy ny saka mpanafatra teny - aza ampiasaina ny teboka satria tsy fantatry ny motera fikarohana. Ho an'ny Google, tsy misy fahasamihafana eo amin'ny 'image_file.jpg' sy 'imagefile.jpg.'
Mahaiza mandanjalanja sy manoritsoritra - Mametraha fe-potoana maro araka izay azonao atao.
Ampiasao mandrakariva ny teny fototra.
Lohateny sy ny toetra hafa
Ny andinin-tsoratra masina na alika dia manondro ireo toetra izay miditra ao amin'ny sary. Ampiasao ireto mba hanomezana antsipirihany bebe kokoa momba ny saryo manokana ireo izay tsy tafiditra ao amin'ny anaran'ny rakitra.
Mankalaza ny haavon'ny tranonkalanao amin'ny fanalefahana ny saryo amin'ny vitsy kely indrindra azo atao. Adobe Photoshop, ImageOptim, JPEGmini ary PunyPNG dia fitaovana mafonja azonao ampiasaina amin'izany. Aza adino ny manandrana ny fizahana-pejin-peo an'i Google amin'ny fanondroana sary izay manodina ny haingan'ny lahatsoratr'ilay pejy.